”Sababta Uu Imaaraadku Ugu mintidayo Somaliland!” – Warsidaha Israel ugu af dheer oo Faallo Ku Sharraxaya. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News ”Sababta Uu Imaaraadku Ugu mintidayo Somaliland!” – Warsidaha Israel ugu af dheer...
”Sababta Uu Imaaraadku Ugu mintidayo Somaliland!” – Warsidaha Israel ugu af dheer oo Faallo Ku Sharraxaya.
(Walwaal Online) 21 Sebt 2020 – Jeer uu 60 sanadood ka dib Maraykanku u muuqanaya mid si aan la dareemayn dib u guranaya ayay Turkiga iyo Iiraan waxay doonayaan in ay isku ballaadhiyaan Afrika, ayuu qoraalkiisa ku bilaabay wargayska Jerusalem Post ee Israel ka soo baxa..
Waxaa sidoo kale shabakado halkaa ka samaysanaya Ruushaanka iyo Shiinaha, xilli uu Maraykankuna sii yaraynayo doorkiisa 60 sanadood ka dib gumaysigii reer Yurub.
Roolka ah mid iska soo taraya ee Turkey iyo Iiraan, ayaa dalalka Carabtu u arkaan mid hujuun ah oo halis ku ah danahooda istaraatijiga ah sida uu qabo wargaysku.
”Warbaahinta Khaliijku waxay ka walaacsan tahay in Turkigu uu saldhig wayn ku leeyahay Somalia, isagoo weliba saldhigyo kale ka samaysanaya Libya, Suudaan iyo Tuniisiya,” ayuu leeyahay Jerusalem Post.
Wuxuu sheegay in tani tahay mid loo arko hirdan loogu jiro gobolka Bariga Afrika, kaasoo dhinaca ku haya marinka istaraatijiga ah ee Badda Cas ee Bab al-Mandeb oo ay marto saliidda Sucuudigu, balse waxaa uu hirdanku sidoo kale ka socdaa Woqooyiga Afrika, gaar ahaan Libya iyo Tuniisiya.
Labadaa gobol ee Woqooyiga iyo Bariga Afrika ba waa kuwo deris la ah xadna la leh Carabta, taasoo uga dhigan inay saamayn toos ah ku yeelanayso amaanka Riyaad ilaa Qaahira.
‘Taasi waa sababta uu Imaaraadka, tusaale loogu soo qaadan karo xiisaha uu u qabo Somaliland, oo ah gobol is maamul hoosaad leh oo sheegtay inuu ka madax bannaan yahay Somalia.” ayuu ku sababaynaa Jerusalem Post.
Waxaa intaa dheer kooxo kale oo loo adeegsado dagaal wakaaladeed oo ka howlgala min Bariga Afrika ilaa Saaxil sida Al-Shabab, Boko Haram oo Al-Qaacida lala xidhiidhinayo iyo ISIS.
Waxay ku faafsan yihiin min Niger, Burkina Faso, Central African Republic, Mali iyo dalal kale, iyadoo maqaal lagu qoray The National oo ka soo baxa Imaaraadku uu sheegay in Iiraan ay dagaal wakaaladeed ka waddo Central African Republic (CAR).
Iiaan ayaa sidoo kale joogta Nigeria iyo South Africa halka Hezbollah oo ah gacanta dheer ee Iiraan uu sidoo kale joogo Galbeedka Afrika.
Previous articleSheekofaneedda Cusub Ee Carabta Iyo Midabtakoorka Madowga (qaybta 1aad)
Next articleSheekofaneedda Cusub Ee Carabta Iyo Midabtakoorka Madowga (qaybta 2aad)